Ninka keligiis dib usoo nooleeyay keyn gubatay! | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Ninka keligiis dib usoo nooleeyay keyn gubatay!
Nin keyn gubatay dib usoo nooleeyay
Indonesia (Halqaran.com) – Waxaa loogu yeeri jiray “Ninka Waalan” balse hadda waxaa loogu yeeraa halyey sababta oo ah wuxuu dhul cabbirkiisu yahay 250 hektar ka dhigay duni cagaaran oo dhirtu ay isku ciriiriso.
Sheekada Sadiman oo isaga oo keligiis ah ku guuleystay inuu keyn sii dhimaneysa kusoo celiyo nolosha, dhibaatada uu xalkeedu helay waxay kasoo bilaabaneysaa sannadkii 1960-kii. Dab ballaaran oo qabsaday keynta ayaa ka dhigay digo iyo danbas. Dadka deegaanka waxay la daala-dhacayeen macluul iyo abaaro illaa halyaygani usoo baxay kaas oo ku guuleystay inuu nolosha kusoo celiyo keyntii dhimatay si ay nolol cusub ugu noqoto bulshadiisa.
Sadiman waxaa la guddoonsiiyay abaalmarinno badan uu ku mutay halgankiisa waxaana loo aqoonsaday halyey qaran gudaha Induniisiya.
Nin dib usoo nooleeyay